Ikamva Trip Lee — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Uninzi uyazi ngam njengoko rapper kunye inkqenkqeza, kodwa inyaniso, entliziyweni Ndiye bekusoloko ngumshumayeli.
Kuba gama bendikhe ukwenza umculo, umnqweno wam nekonsathi ibe ukuvakalisa iVangeli baxele ukulunga nozuko kaYesu Krestu. Ngobabalo lukaThixo Ndiye ndafumana ithuba ukusebenzisa umculo ukwenza ukuba kwiqonga kawonke. Ndiye bathanda ngamnye wesibini kwaye ndiye ndazama ukuyenza loo nto ngabugcisa. Emveni kweminyaka, Ndikhe ndeva uThixo endibiza nokusixhobisela kum nje ukuba umculo, kodwa ukushumayela baze babhale.
Yiloo nto kunyaka ophelileyo ndabhalela Ubomi Good, incwadi lide nzulu umyalezo emva kwam irekhodi yesihloko efanayo. Yinto yoko ndabhengeza sokuwa wokugqibela bendingayi kuba kuhamba kangangoko ndiye. Ndifuna ukufunda indlela ngumfundisikazi othembekileyo, kwaye kuphela ngokwenene kwenzeka kwimeko kwicawa yasekuhlaleni. Ngoko ke wathatha ixesha ukutyala zokufunda abefundisi uThixo ecaweni yam Washington, DC. iNkosi ithandile, ngokuba ndiya kusebenza kubasebenzi ecaweni yam, Ndiza kuba nakho ukuphuhlisa ngaphezulu izixhobo kufuneka ukukhonza ixesha elide kubulungiseleli basekuhlaleni.
Ndiya kuthemba uThixo ukuba imihla elungileyo ephambi, kwaye ungakhathazeki - uya beve okuninzi kum, abhale umculo ukufundisa nokushumayela. Ndinombulelo kuba yonke inkxaso yenu endleleni, kwaye Ndiyanimema ukuba nizame kunye nam endleleni phambi.
Antoine Mason • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:42 mna • impendulo
Oku kunjalo akucaci. Ngoko ke abazali bakhe umhlala ngokupheleleyo kumculo?
Daniel Blagrove • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:45 mna • impendulo
Akukho yena va nga unyathele kude umculo, ke ukuba angaphezu yexesha lakhe izifundo zakhe yasemaphandleni kunye nokuzinikela ukuba ndiye ecaweni yakhe lendawo
Alex • EyeThupha 20, 2013 ngexesha 1:14 pm • impendulo
Ekuqaleni ndandikholelwa ukuba umhlala. Ke kaloku, ngalo lonke ixesha umamele iingoma yakhe endala, Mna efana… kungona emva, ke yindlela elungileyo kakhulu ukuba kakhulu. Ukanti omnye amagcisa endizithandayo.
Cguerrido • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:46 mna • impendulo
Awesome ngayo mkhulu ukubona umntu oselula ukulungele ukuba balandele uthixo de uzakwehla ukusuka career yomculo njengoko ingqalelo yakhe iphambili nokubeka oothixo ilizwi njengoko njengomshumayeli nomfundisi kuqala. Wena kakade ukwenza ukuba uyazi umculo wakho, ngoku yawo ingoma musicless.
ngaphandle uCharles • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:46 mna • impendulo
Im nebhongo Uhambo,umntu oselula ngenene ufumana God.He ufumana intsingiselo lokwenene siphilele God.Keep umsebenzi UHAMBO olungileyo ;)
Antoine Mason • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:46 mna • impendulo
Kucaca Trip iya kuba zobufundisi. Uyamthanda uKristu rap kakhulu. Yena, akunikayo ukuba phezulu.
Vinny_uk • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:47 mna • impendulo
Yena ngokwenene akukho mfuneko nabani na ukuze ndifihle amehlo bhuti kulungileyo, ngokunyaniseka…
Malak • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:47 mna • impendulo
Ngubani na uphulaphule seentshumayelo? Ndibona umsebenzi ezihlangene Piper kulo msebenzi Reach kaThixo, into enye uhlobo amanani olumamelayo ukuze benze / ukukhanyiselwa isibhalo?
Efrayimi Franklin • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:47 mna • impendulo
Ndiyabulela Thixo ukuba indoda. Wena intsikelelo.
Ggf2005 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:47 mna • impendulo
angathanda ukukuva uthetha, bakho abalungiseleli umculo umphefumlo wam
Malak • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:48 mna • impendulo
Yena sele kwenziwe iintshumayelo eziliqela, ningawufumana ku Youtube.
Jeremydaniel95 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:48 mna • impendulo
ukhuthazo kundenza ndizive ekwenzeni isigqibo nanini i ibonisa kwezinye umculo wakho. ubabala kakhulu ngakumbi!
Judith Amulen • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:49 mna • impendulo
Ngaba wamkhuthaza uthando lwakho ngenxa kaKristu.
mark Block • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:49 mna • impendulo
Khangela phambili ukuva ngakumbi kuwe kungekudala, nokuba ikuluphi na uhlobo ukuze abe.
rush 1ceDark nobudlova • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:49 mna • impendulo
Ukukhangela phambili oko iNkosi iya kuqhubeka ntoni na ngawe, Bro. Excellent.
James Aggrey • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:49 mna • impendulo
Yiyiphi ibandla DC ngaba bakhonza?
Mat Smethurst • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:50 mna • impendulo
Anthony_Nickens • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:51 mna • impendulo
ngokuqinisekileyo ukuqonda, ukubizwa engumalusi yokuqala umhlambi wakhe. Siza ukuba inkomfa ecaweni yam New Church eBheteli Kansas City, Kansas ngakumbi azinikele kwaye nabefundisi eza. Umfundisi My Suff. Bishop A. Glenn paul yinto umcebisi egqwesileyo kwaye uyakuthanda ukutyhala abantu ngobuninzi iintsikelelo kaThixo kubomi babo. Kufuneka ufune naye up on FB!
Travis Nunnjr40 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:51 mna • impendulo
Ndiyathandaza ukuba uMoya oyiNgcwele ekhokela inyathelo yakho kwaye ikhokelele ukuba izinto ezinkulu ngcono.
Angela A. Spencer-Mukes • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:51 mna • impendulo
Khumbula nje ukuba ukushumayela unxibelelana ivangeli, ke wenza ukuba best. Bendisoloko ndifumene umculo wakho ukuba zintshumayelo ezimangalisayo. A lot of amaxesha sicinga ukuba ubizo’ kuthetha ukuba kufuneka senze indima standard uMshumayeli, xa oko yena ngokusixhobisa kuba oko izandla zethu ukufumana ukwenza.
My iNkosi ikusikelele akulondoloze.
footeus • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:51 mna • impendulo
Oku ngenene akazange ndothuka. Ndiyabona ukuba kulapho intliziyo dude kaThixo lubiza. Yena ukuhlala unyanisekile yaye ndithandaza ukuba uThixo kuba luncedo kuye. Ke bona ubunewu-othobekileyo. Yinto funny ukuba ndiya unxibe kwakhe “Ngaba I ukuqhayisa ngalo iNkosi yam?” wristband. Nantso mna ndiyazi uya kufumana uzuko ngenxa yoko ndikubulelayo mna ndingoyena zonke nayo. Masihambe!!!!!
Paul Horne • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:52 mna • impendulo
UThixo akusikelele nawe umzalwana njengoko uhamba emva kulo mzamo. I baye umculo yakho nemfundiso yakho iqinisiwe. Ndiyathemba iyaqhubeka iNkosi ukuba azukiswe ngenxa yomsebenzi wenu.
Khankanya: Yintoni I Funda umxokozelo – 08/20/2013 (a.m.) | Emeth Aletheia
CherishJesusLuv • EyeThupha 20, 2013 ngexesha 5:59 mna • impendulo
Mna lo mgama uya Uhambo nawe.
Hebhere 12:1-2 Ngako oko ke Ngako oko ke, sinelifu elingakanana nje elisingqongileyo lamangqina, masithi nathi, siwubekile nxamnye wonke umthwalo, naso isono esinokusirhawula ngokulula kakhulu ngokusisulu [nathi], silubaleke ngomonde ugqatso olubekwe phambi kwethu, Sise amehlo kuyo iMbangi noMgqibelelisi [yethu] ukholo; owathi, ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe, wawunyamezela umnqamlezo, elidelile ihlazo, waza wahlala phantsi ngasekunene kwetrone kaThixo.
Tina • EyeThupha 21, 2013 ngexesha 10:48 mna • impendulo
Nani yonke uhambo indlela! Luv ukukuva ukusuka umculo wakho incwadi yakho iintshumayelo zakho. Ngamana iNkosi Good yethu qhubeka wena nosapho lwakho ukuba asikelele.
sibonile • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 5:09 pm • impendulo
I curtu kakhulu umculo Trip Lee kwaye singathanda ukumbona ukucula Brazil.
Thenga • EyeNkanga 19, 2013 ngexesha 9:22 pm • impendulo
umculo Uri nje elungileyo kakhulu ukuba nibale! umculo wakho iintshumayelo zakho…..irwece alot wemiphefumlo ukusa kwinqanaba ukuba awuqapheli. Kusenokuba lingaveli kwiintengiso albhamu, Grammys, wathengisa ibonisa kodwa siyazi ukuba yalo uzuko lwakhe. Ngathi uthi musa khangela ukuba kweebhokisi uJesu ekhululekile, ukuba ayisekho. Ndiya kuthi oku ukuba ubutyala okanye uthando umculo athe wemba imiphefumlo yenu ngokwaneleyo, Ndiyazi ukuba uya kubuya! Cinga bevangeli abo batyakatywa, ndibabulale kule mihla ngenxa kaKristu…..Ndiyazi abaninzi kubo babecinga ukuba abuyele iicawa zabo zendawo apho kukho intuthuzelo! Bona eyarhaxwayo yamajoni…..amaqhawe….i bayihloniphe ngaphezu kwayo nayiphi na enye “nqakraza” kuKristu….Ngempela “unashamed”!